Akụkọ - Zhou Jiangyong gara na Jiande nkpuchi emeputa chaomeimask ka ichoputa
Zhou Jiangyong gara Jiande nkpuchi emeputa chaomeimask ka ichoputa
N'ehihie nke Jenụwarị 27th, Zhou Jiangyong, onye otu so na Kọmitii Kwụsị nke Kọmitii Mpaghara Ọchịchị na odeakwụkwọ nke Kọmitii Kọmitii nke Hangzhou, gara Chaomei Daily Chemical Co., Ltd. (onye na-emepụta ngwaahịa nchekwa ọrịa na-efe efe) iji nyochaa. O kwusiri ike na ọ dị mkpa iji mejuputa mmụọ nke ntuziaka dị mkpa nke General Secretary Jinping, yana dịka mkpebi na ntinye nke Kọmitii Etiti Party, Council Council, Kọmitii Party nke Ọchịchị na Gọọmentị, na-eme mgbalị niile iji rụọ ọrụ dị mma n'ịmepụta na ịnyefe ihe eji egbochi ọrịa, iji hụ na mkpa nke mgbochi ọrịa, njikwa na ọgwụgwọ, yana iji hụ na nchekwa na nchekwa nke ndị mmadụ. Ahụ ike. Ndị isi Hangzhou City Xu Ming na Ke Jixin na ndị isi obodo anyị bụ Tong Dingqian, Zhu Huan, na Zheng Zhihua sonyere.
Na omumuihe nke Chaomei Daily Chemical Co., Ltd., igbe nke nkpuchi ekpuchila ma dị njikere iziga n'akụkụ niile nke mba ahụ. Iji nwee ike igbochi ma chịkwaa ọrịa oyi baa nke coronavirus ọhụrụ ahụ, ndị ọrụ nke North Korea, United States na Japan Chemical enyefela Ememe Oge opupu iji sonye ezinụlọ ha wee laghachi ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-arụ ọrụ oge iji mee mkpuchi .
Na-esote usoro mmepụta nke North Korea na United States, Zhou Jiangyong gosipụtara ekele ya nye ndị ọrụ nke Shexiaojia maka onye ọ bụla, ma gbaa onye ọ bụla ume ịbawanye arụpụta ọrụ, mee ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, ma nyekwuo onyinye maka igbochi na ịchịkwa mba ahụ. , ógbè, na obodo. Mgbe ị ghọtara usoro mmepụta, ikike mmepụta na ngwongwo nke ihe nkpuchi n'ụzọ zuru ezu, Zhou Jiangyong kwuru na ihe nkpuchi nchebe bụ ihe dị mkpa maka igbochi na ịchịkwa ọrịa. Kemgbe ọrịa oyi baa mere site na coronavirus ọhụrụ, ọchịchọ maka ihe nkpuchi na ngwa nchekwa ndị ọzọ apụtala. Mgbochi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịnye ihe na-ama maka ọnọdụ izugbe ma na-eburu n'uche ọnọdụ zuru oke, hapụ oge ezumike oge ezumike, tinye ego zuru ezu na ntinye nkwa, ma rụọ ọrụ dị mkpa n'oge oge dị egwu. Enwere m olileanya na ị ga-eme ihe niile enwere ike iji merie ihe isi ike, yana n'okpuru ịkwado ịdị mma na nchekwa, ị ga-anwa ike gị niile ịbawanye ikike mmepụta ma hụ na mkpa nke ụlọ ọrụ ahụike na ọha na eze. Ngalaba niile dị mkpa ga-eme ike ha niile iji hụ na ọrụ, ịhazi na dozie nsogbu ndị bara uru dị ka oke akụrụngwa, nkesa ngwa ahịa, nyocha mma ngwaahịa, ma jiri akọ na-ekenye ndị ọrụ afọ ofufo sitere na ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ iji nyere aka na mmepụta, ma nyere ụlọ ọrụ aka na usoro nke ike mmadu, ihe ndi ozo na ego. Ike mmepụta zuru ezu na-eme ka e nweta ihe nchekwa dị ka ihe nkpuchi ma na-enye nkwado siri ike maka mgbochi na njikwa ọrịa.